Halkan Ka Akhri taxanihii Ila Qosol. iyo Qalinkaa:Cabdullaahi Maxamed Cumar |
Halkan Ka Akhri taxanihii Ila Qosol. iyo Qalinkaa:Cabdullaahi Maxamed Cumar
Barinaye ma barideen akhristayaal,
ku soo dhawaada sheeko kale oo ka mid ah sheekooyinkeennii Ila Qosol.
Wadaad socoto ah ayaa habeen reer u soo hooydey. Intii aanu reerka immana, casarkii ayuu adhigii reerka
oo duleedka daaqayey soo dhexmaray – ishana soo mariyey. Wuxu adhiga ku soo arkay, wan weyn oo galaalan. Wankii ayuu wadaadkii soo ishaaqsaday oo is yidhi,” Allaylehe kaasi ayaa kugu habboon ee subaxa la ambabax!”
Markii habeenkii si fiican loo sooray, ayaa subaxii markii salaadda la tukadey shaah loo keenay. Kolkii uu shaahii cabbay, ayuu sheeko bilaabay. Wuxu ka sheekeeyey, manaam (riyo) habeenimadii la tusay oo ahayd; isaga oo reerka kala ambabaxay, wan galaalan oo ay isagana duco ka dhacday. Waa kii uu shalay casarkii soo arkaye garo!!
Dabadeedna, waxa loogu jawaabey; sheekh haddii wankaasi xalay lagu tusay, waa lagu siini. Shaaw waxa isna adhiga ku jirey, wan yar oo galaalan oo aanu shalay wadaadku soo arag. Halkii ayaa lagu ducaystey. Wadaadkiina markii adhigu dareerayey, ayaa loo soo xidhay wankii yaraa ee galaalnaa!!
Haddaba, markii uu wadaadkii soo ambaxay ayaa la guddoonsiiyey, wankii yaraa ee galaalnaa oo geed ku xidhanaa. Wadaadkii oo yaabban oo indhihiisa rumaysan la’, ayaa yidhi hal-ku-dhegga taariikhda galay ee ah, “Bal inta uu le’eg yahay ee uu galaalan yahay eega!”Filan waa iyo fajiciso dheh!
Cabdullaahi Maxamed CumarEmail: timacadde56@hotmail.com